Iri Zano Rakanakisa reKubudirira kweMireniyamu Zvekushambadzira Maitiro | Martech Zone
Chishanu, December 7, 2018 Chishanu, December 7, 2018 Stacey Anoshamisa
Iyo inyika yemavhidhiyo ekati, kushambadzira kwehutachiona, uye chinotevera chinhu chikuru. Nemapuratifomu ese epamhepo kusvika kune vangangove vatengi, dambudziko hombe nderekuti ungaita sei gadzira chigadzirwa chako chakakodzera uye chinodiwa kune yako musika wekutengesa.
Kana yako yakanangwa musika iri mamireniyumu saka iwe une rakatonyanya basa basa kupa kune izvo zvido zvechizvarwa icho chinoshandisa maawa pazuva pazuva pasocial media uye chisina kuburitswa neyechinyakare nzira dzekutengesa.
Chizvarwa chinoziva chaizvo zvavanoda uye chisingagadzirise chero chinhu chidiki itsime… rakaomarara boka. Zvisinei, izvi hazvigoneke gadzira nzira dzinobudirira dzekutengesa dzinotarisa mireniyamu, zvinongoda nzira nyowani yekubatana navo.
Kana iwe uri kuyedza kusvika zviuru zvemamirioni pane zvinhu zvishoma zvekudzivisa kana iwe uchida kuve nemushandirapamwe wekushambadzira wakabudirira:
Anorema Mavara-Akavakirwa Mukati
Zviziviso paTV nemapepanhau
Izvi zvinhu zvinowanzo shandura zviuru zvemamirioni kure nekambani kana chigadzirwa. Ivo havadi kuudzwa zvekutenga nenzira imwecheteyo sezvizvarwa zvakapfuura izvo zvakapindura zvakanaka kune glitz uye runako rwekushambadzira kwakanyatsoiswa uye neyakajeka nzvimbo yekutengesa.
Zvinhu zvitatu zvakakosha mukugadzira nzira inoshanda yekutengesa yezviuru zvemamirioni. Unofanira: Shingairira, Nakidzwa, uye Dzidzisa.
Masocial media mawebhusaiti senge Instagram, Snapchat, Twitter, uye Youtube zvinoshandiswa neIwo mapuratifomu akakwana kutumira uye kusimudzira zvemukati izvo zvinotaridzika zvinotaridzika, zvinogovaniswa, uye zvinonyanya kukosha, zvinodzokororwa.
Recently, Honda akagadzira mushambadzi wakabudirira kwazvo wekushambadzira wakanangana nemireniyamu nekushandisa mafirita e Instagram uye nhevedzano yeSnapChats iyo yakagovaniswa semoto wemusango. Maitiro avo akavabvumidza kuti vagadzire zvirinyore uye zvinogoverwa zvemukati munzira yazvino neyenzanga inoenderana pasina kumanikidza zvakanyanya pakutengesa.
Wendy's anochengetedza anoshanda Twitter account iyo inowanzo pindura vatengi mibvunzo ne akangwara, akapinza, uye anosetsa. Rudzi urwu rwe "trolling" ibwe rekona yazvino millennial tsika uye kubatisa yako inogona kuita mireniyamu chinangwa nenzira iyi ndiko kubheja kwako kwakanakisa kwekubaya mune ino inonyanya kutsvakwa mutengi base.
Chimwe chezvinhu zvikuru mukugadzira inoshanda uye inobudirira nzira dzekutengesaicho chinangwa chemireniyamu ndechekushingairira kuvabatanidza ivo pasocial media mapuratifomu avanoda kushandisa. Nekuita izvi iwe uri kutora danho rekutanga kukura rako revatengi uye kusangana nezvinangwa zvako zvekuita uye purofiti fungidziro.
Mavhidhiyo ave juggernaut yekushambadzira uye makambani shandisa mamirioni emadhora pagore kushambadzira vhidhiyo pamawebhusaiti uye mapuratifomu enhau. Asi yako yakajairwa iyi-izvi-izvo-zvatiri-uye-izvi-izvi-zvatiri- kutengesa chimiro chevhidhiyo kushambadzira hakuzoite chero chinhu kufadza mireniyamu yevatengi base.
Mavhidhiyo ehutachiona ari chikamu chikuru chekushambadzira uye kugadzira vhidhiyo inova inotevera chinhu chikuru ndiyo yakanyanya kunaka nzira yekuvaraidza uye kukwezva yako yemireniyamu yevatengi base. Nemaawa anopfuura mana pazuva anopedzwa pamafoni avo, zvakachengeteka kutaura kuti mamireniyamu anoda vhidhiyo yakanaka. Katsi, inokundikana, satires, remixes enhau nhau, yakaipa miromo kuverenga, iwe unoitumidza kuti ivo vakazviona.
Makambani mazhinji senge Old Spice uye GoDaddy anozivikanwa nekuda kwepamusoro vhidhiyo kushambadza iyo inogara ichienda hutachiona nekuda kwehukama hwavo, kurara pabonde, kuseka, uye dzimwe nguva pasi-kurudyi-chaiko-nyika-chokwadi.
Uye haachisiri mavhidhiyo futi!
Uye nepo pfupi pfupi inosetsa vhidhiyo is nzira huru yekubata yako mamirioni vateereri, chokwadi ndechekuti haisi iyo nzira chete. Kuvaraidza vateereri vako vane chiuru chemakore kunogona zvakare kuwanikwa kuburikidza nezvinyorwa zvipfupi zvinobata zvine chekuita nekutenda kwavo, nyaya dzemagariro, uye nhoroondo dzechokwadi-dzenyika. Vanhu vazhinji, kusanganisira Zviuru zvemakore sarudza ipfupi uye nyaya dzinovamanikidza dzinovamanikidza kuti vaverenge chidimbu chose. Kana iwe usingakwanise kugadzira zvemukati zvekunyora zvemukati iwe unofanirwa kutora uye kunakidza vavariro yako vateereri, saka unogona kufunga nezve kutsvaga vanyori vevanozvimiririra pamapuratifomu senge Upwork kana kuhaya vanyori kubva kuneshumiro senge EssayTigers.
Mafirita, memes. boomerangs, zvitambi, clickbait, uye nharembozha zvese zvave nzira dzakanangana nekutarisa vateereri vasingatapurike nehunyanzvi hwekushambadzira. Aya ekuwedzera mafomu eakavaraidzo account yemamirioni ekuda uye masheya ayo anonyengedza kusimudzira chigadzirwa chako pasina kumanikidza icho pasi chingangoita vatengi huro.
Nekudaro iwe unofunga kufadza yako yemireniyumu yevatengi base kuburikidza neyako nzira yekutengesa, ingo ita chokwadi chekutevera aya akareruka nhungamiro:
Ita kuti ive Inofarirwa!
Ita kuti igoverwe!
Ita kuti ive Inoshanda!
Ita kuti ive Yekutanga!
Ita kuti irondedzerwe!
Kudzidzisa mamireniyamu pane zvakanakira chigadzirwa, chinhu chekupedzisira chekutarisa kana uchigadzira nzira dzinobudirira dzekutengesa dzemamirioni. Kunyanya chiuru chemireniyoni ichiziva nezve yako kambani uye chigadzirwa - kubva marongero aakaitwa kuenda uko purofiti inoenda - zvakanyanya mukana wekuita sarudzo yekutenga kubva kwauri.
Funga nezvekugadzira nzira dzekutengesa idzo, kuwedzera kune zvimwe zvinangwa zvako, dzidzisa yako yemireniyamu tarisiro base nezvibatsiro kuchengetedza zvakatipoteredza, kodzero dzevanhu, kana basa rerubatsiro iro purofiti kubva muchigadzirwa inoenda yakanangana nekubatsira. Nenzira iyoyo, zviuru zvemamirioni vanonzwa simba rekutenga kwavo vasina mhosva yekushandisa.
Kambani yezvipfeko Patagonia nguva pfupi yadarika yakapa purofiti yezuva rose yeVatema Chishanu Kutengesa kune rudo. Kutengesa kwavo kwaive kuburikidza nedenga uye zano ravo rekushambadzira raivimba zvakanyanya pamireniyoni vachibatana nechikonzero uye kugovana ruzivo neshamwari neshamwari.
Kunyangwe iyo ALS Ice Bucket Dambudziko yaive yakashata mushambadzi wekushambadzira wakabudirira iyo yakavhenganiswa dzidzo nemubhadharo wemupiro nenzira inonakidza uye inonakidza iyo yaive nyore kugadzira uye yakapa mukana we internet mukurumbira. Mukupedzisira, sangano rakakwidza pamusoro pe $ 115M mupiro.
Mamwe makambani akatevera nzira dzakafanana dzekushambadza nekushambadza nekuita kuti zviuru zvemazana zvizive nezvebasa ravo rerudo, vachizvibatanidza nekushambadzira kunofambira mberi kune vanhu vanoita bonde kana vakadzi, uye kunyange kusimudzira marongero avo nemaitiro ekuti vatengi vazive nezve makwikwi uye anorarama mibairo. uye mabhenefiti akabhadharwa kune vese vashandi vavo.
Kupinza dzidzo mune yako nzira yekutengesa ndeye Zvakakosha kusvika pamamirioni. Kunyanya iwe uchikwanisa kuzvibatanidza neakasiyana maficha echigadzirwa kana kambani, zviri nyore kuti ugadzire kwenguva refu kuvimbika uye uchienderera nekutengesa zvigadzirwa kwavari zvinobudirira.
Maitiro Aungaita Kuti Zvishande!
Ipo kuisa nzira yemugwagwa kune yakabudirira kushambadzira mushandirapamwe inotarisa mireniyamu iri nyore, maitiro ekuti zviitwe zvinoda basa rakawanda sezvo zvese zvigadzirwa, brand, uye kambani zvakasiyana.
Kutanga nekutsvaga kwakabudirira (uye kunyange kutadza) nzira dzekutengesa idzo dzakashandiswa nemamwe makambani. Dzidza kubva pakuzviita kwavo, maturusi api avakashandisa, uye nekwaniso yavo batana, unakidza, uye unodzidzisa yavo yemireniyumu yevatengi base.
Chakaipisisa mamiriro ezvinhu, hira chiuru chemakore kana maviri kuti akupe kungonzwisisa kwaunoda mune izvo zvinonyanya kutsvakwa nevanhu uye zvaasingade.
Tags: Filtersmemes. boomerangkutangastickers
Stacey Wonder ane ruzivo rwekushambadzira zvemukati uye munyori wekuzvimiririra. Stacey akagadzira yakawandisa yemablog blog ezviuru zvemamirioni pane misoro ine chekuita nedzidzo, kuzvisimudzira, basa, uye kushambadzira. Stacey anogara achiedza kusimudzira hunyanzvi hwake uye nekugovana zvakanakisa maitiro nevamwe. Paasina kubatikana nemapurojekiti ake, Stacey anonyora pfupi nyaya dzevatariri.